एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ? यी चीज खाईदिनुस् – Naya Kura Daily
September 4, 2020 104
कसरी खाने? हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस्। यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो, मोटो र मजबुत हुन्छ।
त्यस्तै दोस्रो चीज हो आलु।यसको लागि ३ ओटा ठुलो ठुलो आलु उमाल्ने। हरेक दिन यसरी उमालेको आलु खानुहोस्। आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ। –एजेन्सीको सहयोगमा
Nextदेसका रियल हिरो हरूलाई सम्मान स्वरुप १/१ लाईक गरौँ है
सरकारी सहुलियतको खसी–बोकाको मूल्य प्रतिकिलो ५६० रुपैयाँ
आकासमा उडिरहेका दुई विमान ठो’क्किए, ५ जनाको नि’धन